राशि अनुसार घरको कुन दिशामा आफ्नो धन-सम्पत्ति राख्ने ?
एजेन्सी । आज हामीले पैसा तथा धन कमाएपछि राशि अनुसार घरको कुन दिशामा राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउँदै छौं । ज्योतिषको भनाई अनुसार घरको कुन दिशामा आफ्नो धन-सम्पत्ति राख्दा सम्पन्नता र समृद्धीमा प्रगति हुन्छ ?
१. मेष राशिः
घरको पश्चिम दिशामा धन-सम्पत्ति राख्नु सबै भन्दा बढी उत्तम हुन्छ । धन सम्पत्ति राखिएको ठाउँमा फलामको टुक्रा राख्नु आवश्यक छ । बेलुकीको समयमा लेनदेनको काम नगर्नु उत्तम हुनेछ ।
२. बृष राशिः
घरको पूर्वी दिशामा धन-सम्पत्ति राख्नु उत्तम हुन्छ । राखिएको धन सम्पत्तिसँगै सुन वा पितलको टुक्रा राख्दा सँधै राम्रो हुन्छ । बेलुकीको समयमा लेनदेनबाट बच्नु आवश्यक छ ।
३. मिथुन राशिः
घरको उत्तरी दिशामा धन-सम्पत्ति राख्नु धेरै फाइदा जनक छ । धन सम्पत्तिसँगै तामाको बस्तु राख्नु उत्तम हुन्छ । यो राशिका मानिसले मंगलबार लेनदेन गर्नुहुन्न ।
४. कर्कट राशिः
घरको अग्नेय कोण अर्थात् पूर्व दक्षिण दिशामा आफ्नो धन-राख्नु शुभ हुन्छ । धनसँथै चाँदीको कुनै चिज राख्नु पर्छ । धन सम्पत्तिसँगै कुनै पनि कालो चिज राख्नु हुदैन ।
घरको पूर्वी दिशामा धनसम्पत्ति राख्ने ठाउँ बनाउनु शुभ हुन्छ । घन-सम्पत्ति राख्ने ठाउँमा चरेसको सामान राख्नु उत्तम हुनेछ । जहाँ सुन पनि राख्न सकिन्छ ।
घरको दक्षिण पश्चिम साइडमा धन-सम्पत्ति राख्नु राम्रो हुनेछ । जहाँ चाँदीको कुनैचिज पनि राख्नु पर्दछ । दिउँसोको समयमा लेनदेन गर्नुहुन्न ।
घरको दक्षिण दिशामा धन राख्दा शुभ हुनेछ । सो स्थानमा रातो कपडा र तामाको कुनै भाँडा राख्दा शुभ हुनेछ ।
घरको उत्तर पश्चिममा धन राख्नु उत्तम हुनेछ । जहाँ हरियो कपडाको टुक्रा पनि सँगै राख्नुपर्दछ ।
यो राशिका मानिसले घरको अग्णेय कोण (दक्षिण पूर्व)मा आफ्नो धन-सम्पत्ति राख्नु शुभ हुनेछ । धन राखिने सो स्थानमा सेतो कपडामा चाँदीको सिक्का राख्दा शुभ हुनेछ ।
यो राशिका मानिसले आफ्नो धन राख्ने ठाउ उत्तर दिशामा बनाउँदा शुभ हुनेछ । साथै गणेशको तस्वीर राख्नु पर्दछ । यो राशिका मानिसले भुलेर पनि अन्य धनसँगै सुन राख्नु हुँदैन ।
यो राशिका मानिसले पूर्व दिशामा आफ्नो धन राख्नु पर्दछ । साथै पँहेलो कपडामा पितलको कुनै पनि बस्तु राख्दा उत्तम हुनेछ । कुनै पनि हालतमा कालो धनको लेनदेनबाट बच्नु पर्दछ ।
यो राशिको मानिसले आफ्नो घरको पश्चिम दिशामा धन-सम्पत्ति राख्नुपर्दछ । जहाँ आइरनको कुनै पनि चिज पनि सँगै राख्नु पर्दछ ।